कोरोना विरुद्ध लड्न चिनियाँ कम्पनीले नेपाललाई दियो २ हजार किट सहयोग ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोना विरुद्ध लड्न चिनियाँ कम्पनीले नेपाललाई दियो २ हजार किट सहयोग !
काठमाडौं । विश्व व्यापाी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न चीनको बिइजिङ मल्टिपल ट्रेड एण्ड कमर्स ब्युरोले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ ।
‘किट सहयोग नेपाल-चीनबीचको भातृत्वको भाव हो,’ कम्पनीका अध्यक्ष हरिप्रसाद ढुंगानाले एपीडी न्युजलाई भनेका छन् ।
किट अभावपछि टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाले जनवरीदेखि हालसम्म ६ सय ८७ नमूना मात्र परीक्षण गर्न सकेको छ । यसमध्ये तीन जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । संक्रमितमध्ये १ जना स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्किसकेका छन् भने २ को उपचार भइरहेको छ ।